Kedu ndị tụkwasịrị ndị mmepe iGaming obi? - cheapinternetsecuritysoftware.com
Otun’ime ihe nkiri kachasị amasị Britain, ịgba chaa chaa esite d e nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọdịmma mba. N’ụzọ dị ịtụnanya, mpaghara ahụ mepụtara ihe karịrị # 14 ijeri na 2018 naanị, dị ka Statista si kwuo.
Mana na 2020, ka mba ahụ banyere usoro mkpọchi mkpọchi d e ịkpapụ mmekọrịta mmadụ ghọrọ ụkpụrụ, a manyere ọtụtụ akụrụngwa ka ha mechie ma mara mma nke ịgba chaa chaa niile na ntanetị.
N’ihi ya, internet casinos t egwuregwu ịkụ nzọ dị na ebe nrụọrụ weebụ nwere nnukwu isi ewu ewu na ewu ewu. Ọbụna ndị na-enweghị mmasịn’ịgba chaa chaa bịara nwee mmasịn’ịgba chaa chaan’ịntanetị, ebe ha hụrụ d e mberede nwere ọtụtụ oge ezumike na aka ha.
Maka ndi ohuru, ichuso cha cha cha cha cha cha cha nwere otutu egwuregwu dị mfe. Mana mgbe ị na-azụ ahịa naanị un t ndị tụkwasịrị obi na ndị a ma ama na weebụ, ịkwesịrị ịhọrọ nhọrọ gị karịa.
Nọn’udo ma ịnwe nnukwu oge pụtara ịchebe ihe egwuregwu d e ịkpa ezi aha. N’ihi ya, website wont oke oke, ndị that a na-atụ aro ka ndị na-emepe emepe iGaming a tụkwasịrị obi na nke kachasị asọpụrụ na ahịa cha chan’ịntanetị ugbu a:
NetEnt dịn’etiti ndị na-eweta sọftụwia egwuregwu kacha mara amara na ụlọ ọrụ ahụ. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 1996, na Sweden, ọ bụ ezie na ọ gbatịpụrụ ọrụ un t ndị ọzọ Europe na United States. NetEnt na-ewe ihe karịrị mmadụ 600, isi ọrụ ya dịkwa na Stockholm na Malta.
Kemgbe ọtụtụ iri afọ na azụmahịa, egwuregwu NetEnt enwetawo ọtụtụ onyinye d e imirikiti nhọpụta a ma ama, na-enyere ha aka ịmalite ikekwe aha ọma kacha mma na ogwe aka nke ụlọ ọrụ egwuregwu. NetEnt makwaara maka ijide ọtụtụ ikikere pụrụ iche na ama ama dịka Guns N ‘Roses, Narcos na Gordon Ramsay’s Kitchen Nightmares.
Starburst na Gonzo’s Quest so na ebe ha na-ewu ewun’ịntanetị, nke ọbụna taa na-adọta ọtụtụ nde ndị egwuregwu kwa elekere kwa ụbọchị. -Gba chaa chaa na-ere ahịa bụkwa ọpụrụiche nke ụmụ okorobịa ndị a, yana ọkachamara croupiers na-akwado egwuregwu na-asọba na ezigbo oge nye ndị egwuregwu gburugburu ụwa.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ikikere ma na-achịkwa ndị isi ịgba chaa chaa kachasị asọpụrụn’ụwa, gụnyere United Kingdom Gambling Commission na Malta Gambling Authority. N’ime afọ ole na ole gara aga, NetEnt tinyere akwụkwọ maka ikikere na US na-ekwu na nso nso a ka iwu egwuregwu ịntanetị kwadoro, dị ka New Jersey na Pennsylvania.
Betsoft Gambling bụkwa otun’ime ihe ndị that a pụrụ ịdabere na ngwanrọ na-eweta na ebe ahụ, mara maka ilekwasị anya na akụkụ ntụrụndụ nke egwuregwu ọ na-enye. Ntọala na 2006 t England, Betsoft na-arụ ọrụ ugbu a websiten’isi ụlọ ọrụ na Malta. Betsoft na-enye egwuregwu cha cha na ngwanrọ ngwanrọ zuru oke maka casinos kachasị ama d e ntanetị, yana saịtị dị ka Wild Casino so na ndị na-enye ogologo ndepụta nke aha ha.
Betsoft amaara ama website t ahụmịhe egwuregwu ọhụụ na-egosipụta 3D cinematics. N’afọ 2008, ha bidoro usoro Slots3 ha – egwuregwu pụrụ iche nwere ihe osise 3D nwere ọkaibe d e eserese dị mma. Wepụtara na 2010, usoro ToGo nyeere aka ịhazigharị ụlọ ọrụ ahụ websiten’ilekwasị anya d e ndakọrịta ngwaọrụ mkpanaka.
Fọdụ egwuregwu kacha ewu ewu na Betsoft gụnyere Dr Jekyll & Maazi Hyde, A Christmas Carol, Sugar Pop Id Lucky 7.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ikikere, gụnyere ikikere 4 klas na Malta Gambling Authority, yana ikikere ndị ọzọ na Curacao, Romania na Italytali.
O doro anya t Microgaming bụ onye nwere ahụmịhe kachasị na ahịa, ebe ọ bụ t e guzobere ya niile na 1994 ma na-ekwupụta ịmepụta ụwa mbụn’ịntanetịn’otu afọ ahụ. Companylọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ website t Isle nke Mmadụ, ma na-enyekwa azịza nke akwụkwọ egwuregwu zuru oken’akụkụ akụrụngwa cha cha na-enweghị njedebe.
Otun’ime ndị ọsụ ụzọ na ụlọ ọrụ ahụ, Microgaming na-emepe egwuregwu egwuregwu cha cha dị elu karịa ihe karịrị afọ iri abụọ, ma bipụtala aha karịrị 800 na ụzọ. Ndị a bụ ụmụ okorobịa na-ahụ maka ịmeghe egwuregwu dị iche iche ikikere website Id franchises ndị a ma ama dị ka Jurassic Park na Game nken’ocheeze.
N’etiti nkwuputa un ka ama ama, Microgaming nwere netwọkụ jackpot kasịnụn’ụwa, na-akwụ ụgwọ ihe karịrị ijeri # 1 ruo ugbu a. N’ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ malitere ịrụ ọrụ na egwuregwu cha cha na-akwado eziokwu, na 2015, natara Digital Gaming Innovation of the Year Id Worldwide Gambling awards.
Microgaming nwere ikikere iji rụọ ọrụ na 20 ahịa dị iche iche, gụnyere United Kingdom, Malta na Sweden. Ọ bụkwa onye otu ntọala eCOGRA, ụlọ ọrụ na-achịkwa ule d e usoro nhazi maka ụlọ ọrụ egwuregwun’ịntanetị.
Egwuregwu RealTime bụ American onye mmepe iGaming nke hibere na Atlanta, Georgia, na 1998, ọ bụkwa otun’ime ndị na-eweta ngwanrọ kacha ochie ka na-azụ ahịa. N’ime afọ ise mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ, egwuregwu ya nwetara onyinye d e nhọpụta dị elu dị elu, na-eme RTG dị ka otun’ime ndị na-enye ọrụ ntụkwasị obi na azụmaahịa a. Kemgbe afọ 2007, ụlọ ọrụ ahụ arụ ọrụ website Id Heredia, Costa Rica.
RTG na-enye ihe karịrị utu aha 300, sitere na egwuregwu okpokoro na oghere iji nwee egwuregwu ndị na-ere ahịa na bingo. Ghara ikwu, otu n’ime netwọọkụ jackpot kachasị na weebụ. Aha ya ndị kachasị ewu ewu bụ Aztec Treasure, Diamond Mine na otu ụyọkọ Krismas-ekeresimesi dịka Santa na-ada azụ.
Nke a bụ akara nke na-elekwasị anya na mma karịa oke – yabụ klaasị kọmpụta nke egwuregwu.
Egwuregwu RealTime na-ejide ikikere website t Curacao Gaming Control Board, ọ bụkwa otun’ime ụlọ ọrụ ole t ole ka na-arụ ọrụ na United States.
Ikpeazụ ma ọlị ma ọ dịghị ihe ọzọ, Playtech wuru aha ọma nke ọma dị ka otun’ime ndị na-emepe egwuregwu na-agba ọsọn’ụwa. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 1999 na Estonia, ma ugbu that a na-arụ ọrụ karịa ndị 6,000 na mba 19. Kemgbe afọ 2012, edepụtara Playtech na Main Market nke London Stock Exchange.
N’ihe karịrị utu aha 700 na pọtụfoliyo ya, a maara Playtech maka naanị un nwere ikikere egwuregwu dịka Matrix, Robocop na ọtụtụ aha sitere na DC Universe, dị ka Superman na Batman. E wezụga oghere na egwuregwu cha cha, Playtech na-enyekwa egwuregwu egwuregwu, egwuregwu lọtrị na ngwanrọ sọftụwia dị ndụ.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ikikere mba ụwa 140 ma na-achịkwa un karịa iwu 20n’ụwa niile – nnukwu mmeta maka ndị na-eweta egwuregwu ịntanetị ọ bụla.
Tags:iGaming Kedu mmepe ndị obi tụkwasịrị
Dengan keadaan saat ini, mungkin perlu beberapa saat sebelum Anda …